Kedu ka ezumike akwụ ụgwọ si arụ ọrụ?
Edere site Tranquillus | Feb 1, 2022 | Iji dozie ma rụọ ọrụ na France
Obere akụkọ nke ezumike akwụ ụgwọ…
ezumike akwụ ụgwọ na-anọchi anya oge ezumike nke ụlọ ọrụ na-aga n'ihu na-akwụ ụgwọ ọnwa onye ọrụ ya. Ọ bụ ọrụ iwu kwadoro. Ọ bụ Front Populaire nke dị na France guzobere izu 2 nke ezumike akwụ ụgwọ na 1936. Ọ bụ André Bergeron, odeakwụkwọ ukwu nke Force Ouvrière mgbe ahụ, bụ onye chọrọ izu 4. Ma, ọ bụ na May 1969 ka e wepụtara iwu ahụ. N'ikpeazụ, na 1982, ọchịchị nke Pierre Mauroy guzobere oge nke 5 izu.
Kedu ihe bụ iwu, kedu ka edobere ha, kedu ka esi akwụ ụgwọ ha ?
Ịkwụ ụgwọ ụgwọ bụ ikike enwetara ozugbo e goro onye ọrụ: ma ọ bụ na ngalaba nkeonwe ma ọ bụ na ọha, ọrụ gị, ntozu gị na oge ọrụ gị (na-adịgide adịgide, nke a kapịrị ọnụ, nwa oge, oge zuru oke na nwa oge. ) .
Onye ọrụ ahụ nwere ikike ụbọchị ọrụ 2,5 (ya bụ Mọnde ruo Satọde) kwa ọnwa rụrụ ọrụ. Nke a na-anọchi anya ụbọchị 30 kwa afọ, ma ọ bụ izu ise. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakọ na ụbọchị azụmahịa (ya bụ Mọnde ruo Fraịde), nke ahụ bụ ụbọchị 5. Ọ dị mkpa ịmara na ọ bụrụ na ị na-anọ nwa oge, ị nwere ikike ị nweta otu ụbọchị ezumike ahụ.
A naghị echebara nkwụsị maka ọrịa ma ọ bụ ezumike ọmụmụ.
Enwere oge iwu nke onye ọrụ ga-ewere n'etiti ụbọchị 12 na 24 n'usoro: site na 1.er Mee ruo Ọktoba 31 kwa afọ.
Onye were gị n'ọrụ ga-etinyerịrị ụbọchị ezumike ndị a na mpempe akwụkwọ akwụ ụgwọ gị. Onye ọrụ ahụ ga-ahapụrịrị ezumike ya na enweghị ike ịnweta ụgwọ nkwụghachi ụgwọ.
Onye were gị n'ọrụ ga-edobekwa tebụl ka ọ dị ọhụrụ. Otú ọ dị, ọ nwere ike ịjụ ụbọchị n'ihi ihe atọ ndị a:
Oge ọrụ siri ike
Gbaa mbọ hụ na aga n'ihu nke ọrụ
Ọnọdụ pụrụ iche. Okwu a na-anọgide na-adị ntakịrị na onye ọrụ gị ga-akọwapụta ọnọdụ ya nke ọma ma nwee ike ịkpalite, dịka ọmụmaatụ, nsogbu ndị a: mmasị akụ na ụba maka ụlọ ọrụ, enweghị onye ọrụ ga-emerụ ahụ maka ọrụ ahụ ...
N'ezie, dabere na nkwekọrịta mkpokọta gị ma ọ bụ nkwekọrịta gị, onye were gị n'ọrụ nwere ike inyekwu gị ụbọchị. N'ebe a, anyị nwere ike ịnye gị ọmụmaatụ:
Hapụ maka ọrụ nkeonwe: ịmepụta azụmahịa, ọdịmma onwe onye ma ọ bụ ihe ọzọ. N'okwu a, ọ ga-abụ nkwekọrịta a ga-eme n'etiti gị na onye were gị n'ọrụ.
Ọpụpụ metụtara ihe omume ezinụlọ: Ọnwụ nke onye òtù ezinụlọ gị, alụmdi na nwunye ma ọ bụ ndị ọzọ. Ị ga-achọ ịnye asambodo.
Anyị na-akpọ gị òkù ọzọ ka ịlele ikike gị site na nkwekọrịta mkpokọta gị.
Agụnyeghị ezumike a na ngụkọ ezumike akwụ ụgwọ.
Gịnị na-ekewa ụbọchị ?
Dị ka anyị hụburu na mbụ, onye ọrụ na-erite uru site na isi ezumike nke ụbọchị 24 ka ọ were n'etiti 1er Mee na Ọktoba 31. Ọ bụrụ na ịnatabeghị ha n'uju site na Ọktoba 31, ị nwere ikike:
Otu ụbọchị ezumike ma ọ bụrụ na ị nwere n'etiti ụbọchị 1 na 3 ịpụ n'èzí oge a
Ụbọchị 2 ọzọ ezumike ma ọ bụrụ na ị nwere n'etiti ụbọchị 6 na 12 ka ịpụpụ oge a.
Ndị a bụ ụbọchị kewara.
Mgbe e wepụrụ ogologo oge ọrụ site na awa 39 ruo awa 35 na France, a na-ahazi ụgwọ ọrụ maka ụlọ ọrụ chọrọ ịnọgide na-arụ ọrụ awa 39 kwa izu. RTT na-anọchi anya ụbọchị izu ike dabara na oge a rụrụ n'etiti awa 35 na 39. Ọ bụ ezumike nkwụghachi ụgwọ.
GỤỌ Ihe Need Kwesịrị Knowmara Banyere Nkeonwe
Karịsịa, ụbọchị ezumike ndị a ekwesịghị inwe mgbagwoju anya na ụbọchị RTT bụ Mbelata na Oge Ọrụ. A na-edobe ha maka ndị mmadụ na ngwugwu kwa ụbọchị (ya mere ndị na-enweghị oge gafere), ya bụ ndị isi. A na-agbakọ ha dịka ndị a:
Ọnụ ọgụgụ nke ụbọchị ọrụ n'ime otu afọ agaghị agafe ụbọchị 218. Na ọnụ ọgụgụ a na-agbakwunyere 52 Saturday na 52 Sunday, ezumike ọha, ụbọchị ezumike akwụ ụgwọ. Anyị na-ewepụ ihe mgbakwunye nke ọnụ ọgụgụ a na 365. Dabere na afọ, anyị na-enweta ụbọchị 11 ma ọ bụ 12 nke RTT. Ị nwere ike ịjụ ha n'efu, mana onye were gị n'ọrụ nwere ike inye ha iwu.
N'ụzọ ezi uche dị na ya, ndị ọrụ nwa oge anaghị erite uru na RTT.
Ego ezumike akwụ ụgwọ
Mgbe ị nọ na nkwekọrịta oge a kapịrị ọnụ ma ọ bụ na ọrụ nwa oge, ị nwere ikike ịnweta ego ezumike akwụ ụgwọ.
N'ụkpụrụ, ị ga-anata 10% nke mkpokọta ego niile enwetara n'oge a na-arụ ọrụ, ya bụ:
The seniority bonus
Kọmishọna ọ bụla
Agbanyeghị, a chọkwara onye were gị n'ọrụ ka ọ rụọ ngụkọ ahụ dabere na usoro mmezi ụgwọ ọnwa iji mee ntụnyere. Ụgwọ a ga-eburu n'uche bụ ụgwọ ọnwa n'ezie.
Onye were ọrụ ga-ahọrọ mgbako kacha mma maka onye ọrụ.
A na-anwa gị site na ezumike akwụghị ụgwọ
Ị nwere ikike ịnweta ezumike kwesịrị ekwesị, mana dịka aha ahụ na-egosi, agaghị akwụ ụgwọ ya. Iwu anaghị achịkwa ụdị nkwụsịtụ nke nkwekọrịta ọrụ. Ya mere ọ dị mkpa ka gị na onye were gị n'ọrụ kwekọrịta. Ọ bụrụ na ị nwere chi ọma, ọ ga-anabata, ma ọ dị mkpa ka ị dee ọnọdụ ndị a tụlere na kwurịtara ọnụ. Ọ dịkwa uru ịlele na amachibidoghị gị ịrụ ọrụ maka onye ọrụ ọzọ. Site na ịkwado nke ọma tupu oge eruo, ị ga-enwe ike iji ohere ezumike a nke ga-agbanwe ndụ gị nke ọma!
GỤỌ Kedu ihe bụ nkwụchi ụtụ?
Ị nwere esemokwu maka ụbọchị ọpụpụ
Usoro ọpụpụ na ezumike bụ ọrụ nke ụlọ ọrụ gị. A na-edozi ya site na nkwekọrịta n'ime ụlọ ọrụ ma ọ bụ n'ime alaka ụlọ ọrụ. Ọ nweghị iwu na-achị nzukọ a. Agbanyeghị, onye were ọrụ ga-agwa ndị ọrụ ya opekata mpe ọnwa 1 tupu ụbọchị akwadoro.
Kedu ka ezumike akwụ ụgwọ si arụ ọrụ? Febụwarị 1, 2022Tranquillus
gara agaEnweghị obere ọrụ: kedu mgbanwe maka ndị ọrụ na mpaghara kacha emetụta?
-esonụKa oge ngafe na-arụ ọrụ
Nkwụghachi ụgwọ na ezumike ọmụmụ